Wararka Maanta: Jimco, Aug 23, 2013-Dowladda Sweden oo Malaayiin Doollar ku bixineysa Soomaaliya 2013—2017
Safiirka ayaa hadalkan ka sheegay shirka Lund oo ah shir sanadle ah oo sanad walba looga hadlo arrimaha dalalka Geeska Afrika, wuxuuna intaas ku daray in dhaqaalahaas uu yahay mid ay Sweden uga qeybqaadaneyso horumarinta dalka Soomaaliya, gaar ahaan xilligan oo uu dalka Soomaaliya ka baxay marxaladdii KMG ahayd.
Soomaaliya si ay cagaheeda isugu taagto ayuu sheegay Danjire Per Lindgärde in loo baahan yahay in dib loo eego dastuurka si looga gudbo khilaafaadyada ka dhalan kara kheyraadka dalka, sidoo kalena loogu diyaargaroobo doorasho waddanka ka dhacda sanadka 2016.
Arrin kale oo muhiim ahayd ayuu ka dhawaajiyay Danjire Per Lindgärde, taasi oo ahayd in dowladda Sweden ay safiir u magacawday Soomaaliya tan iyo sanadkii 1992, wuxuuna safiirkaas magaciisa noogu sheegay Mr. Mikael Lindvall.
Furitaanka shirka kaddib ayaa waxaa HOL in ay Danjire Per Lindgärde weydiiso sida ay Soomaaliya mar kale cagaheeda isugu taagi karto, isla markaana ay uga bixi karto dhibaatada muddada dheer ka jirtay, wuxuuna sheegay in arrintaas ay imaan karto marka la helo dowlad-wanaag, isla markaana la xoojiyo hay’adaha nabadgelyada iyo cadaaladda iyo in dastuurka dib loo eego, loona diyaargaroobo in sanadka 2016 ay doorasho ka dhacdo Soomaaliya.
Wuxuu intaas ku daray Danjire Per Lindgärde in tan iyo markii la soo dhisay Dowladda Soomaaliya ay ka soo wareegatay sanad illaa iyo haddana aan la qaban waxyaabo badan oo la sugayay, taasina ay mustaqbalka keeni karto in aanu dalka gaarin doorasho xilliga loogu talagalay.
Hadalka Danjire Per Lindgärde ayaa wuxuu ku soo beegmayaa iyadoo 16-ka bisha soo socta ee September uu magaalada Brussels ee dalka Belgium uu ka furmi doono shir looga hadlayo horumarinta dalka Soomaaliya, kaasi oo la rajeynayo in ay ka soo bixi doonaan qodobo muhiim ah oo ku saabsan dib-u-dhiska dalka Soomaaliya.
Axmed Gure, Hiiraan Online